Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta", ee uu qorey Cabdinaasir A. Ibraahim | Dhamays Media Group
Gorfeynta Buugga “Masraxa Cadaabta”, ee uu qorey Cabdinaasir A. Ibraahim
Ugu horreyn waxa aan si kal furan ugu hambalyeynayaa inuu qoraha buuggan,Cabdinaasir Axmed Ibraahim ku dhiirrado inuu soo saaro buuggan, aniga oo ogsoon soosaaridda buug inaaney aheyn wax hawl yar, ee ay tahay arrin u baahan dedaal, tacab, iyo karti gaar ah. Maaddaama aanu buuggani aheyn kiisii koowaad, ee uu yahay buuggii saddexaad ee qoruhu inoo soo bandhigo, waxa run ahaantii mudan in si toolmoon wax looga yidhaahdo, taasi oo waxtar togan u noqon doonta isaga iyo dhiggiisaba, una badhitaari doonta waayo-aragnimadooda qoraanimo ee mustaqbalka dhaw iyo ka fog labadaba.
Buuggu waxa uu ka kooban yahay 140 bog, oo soo gudbinayashan sheeko oo gaagaaban. Shanta sheeko inkasta oo ay mawduucyo isku mid ah ka hadlayaansida uu gogoldhigga buugga ku xusaayo qoruhu waxa ay ka hadlayaan “Dhacdooyin nololleedyo run ah. Isla markaa, murugo iyo xanuun badan. Bogga 1aad ee buugga”.Sheekooyinkani waxa ay ka siman yihiin iney dhammaantood u badan yihiin, sheeko dhallinyareed, u badan haasaawe, sheeko wadaag, faraxumeyn, uuraysi, tumasho, tamashleyniyo arrimo kale oo si qaab daran oo aan farshaxannimo ku dhisnayn uu qoruhu u soo tebinaayo. Dhammaan sheekooyinkaasi ma gudbinayaan farriin togan iyo wacyigelin toona. Runtii, waxay sheekooyinku abuurayaan soona gudbinayaan hummaagyo aan mudnayn in sidaa loo wadwado.
Qoraha buuggu inalama wadaagin halkan hordhac ku saabsan buugga oo qeexaaya waxa uu buuggani ka hadlaayo, waxa uu yahay, ulajeedkiisa, iyo waxa uu ka kooban yahayba.Isla markaasina inoo muu soo gudbin qoruhu sida ay iskugu sidkan yihiin sheekooyinku. Halkan qoraha buuggu waxa uu isku margiyey oo uu kala fahmi waayey sida loo kala isticmaalo ama adeegsado labada weedhood ee Hordhac iyo gogoldhig. Inaga oo ogsoon in hordhaca iyo gogoldhigga buuggu ay laba mawduuc oo aad u kala duwan ka hadlaan, halkanna uu qoraha buuggu isku margiyey adeegsigooda. Waxa si gaara u xusid mudan, oo si wacan u kala qalan adeegsiga labada weedhood. Tusaale ahaan gogoldhigga waxa qora qof ka duwan qoraaga. Waana soo ban-dhigid jaad goonni ah oo badhi taaraysa buugga iyo qoraaga. Inta badan waxa qora cid aqoon u leh mawduuca buuggu ka hadlaayo, halka Hordhaca buuggana uu qoro qoraaga ama qoreyaasha buuggu. Waxaana lagu soo bandhigaa xogo mudnaantooda leh oo la xidhiidha mawduuca buugga; isla markaana waxa si kooban loogu soo ban dhigaa waxyaabaha gudaha buugga loogu tegi doono. Buuggan “Masraxa Cadaabta “, ee uu qorey Cabdinaasir Axmed Ibraahim, waxa aad mooddaa inuu arrintaasi baal marey oo jid kale oo aan loo fadhiyin uu isku qaadey.
Shanta sheeko ee buugga ku jirta, hal sheeko oo qoruhu aanu qorin ayaa ku jirta, taasi oo ka duwan sheekooyinka kale oo dhan farshaxannimo ahaan. Sheekadan inaannu qoruhu qorin iyo in kale waxa uu inoogu sheegayaa bogga mahadnaqa, oo magaca qoraha sheekada aanu laheyn qoraha buuggani uu hortiisa inoogu xusaayo, meel kale kuma arkeysid inuu xusaayo cidda leh sheekadaasi. Arrinta yaabka leh ayaa ah, in qoraha buuggani uu sheekooyinka qaar xaggooda sare intaaney bilaabmin uu magaciisa ku xusaayo, sheekada aanu laheyna aanu xusinba. Dhalliisha weyn ee halkan ka muuqata ayaa ah in sheekadaasi cidda qortey aan la fahmi karin, haddii aan loo dhug yeellan bogga mahadnaqa oo si qaabdaran loogu xusey qoraha sheekada kale. Weydiinta qoraha buugga hortaal ayaa ah, in sheekada ergiska ah dusheeda ama meesha ay ka bilaabaneyso uu ugu xusi waayey magaca cidda leh, halka uu kuwiisa dushooda ku xusaayo magaciisa oo far waaweyn ku qoran? Halkan waxa ka muuqata farshaxannimo liidata, oo lagu halbeegi karosida qoraha buuggu ugala masuugey inuu si weyn u xuso. Kaaga sii darane xataa cinwaanka sheekadaasi ayaa far yaryar ku qoran magaceeda, halka kuwa uu qorey Cabdinaasirna ay far waaweyn ku qoran yihiin cinwaannadoodu.
Jeldiga buuggu waa mid leh gefef door ah.In loo kasey iyo in kale ma kala cadda. Jeldiga korkiisa sare waxa ku qoran “tarmintii 1aad”. Maan fahmin ujeeddada qoruhu hawraartan ka leeyahay. Ereyga tarmin waxaan u aqaan badin. Kolkii aan sii hubiyey ee aan ereygaa ka eegay qaamuuska afsoomaaligu waxa uu ereygan “tarmintii” ku micnaynayaa “Badin”. Waxa, haddaba, is weydiin mudan, waxa uu qoraha buuggu ereygaa uga jeedo? Waxa runtu tahay in erey fiican adeegso qoruhu halkan is lahaa, oo aan adiga hortaa la adeegsan, hayeeshee waxa uu gunta ugu dhacey meel aanu burkaba bahal ka eegin. Waxa quman in ereyada cuddoon adeegsigooda loo meel dayo, aqoonta dadka u lehna lala raadsado, haddii kale waxa aad marin habaabineysaa ummadda.Daabacaaddii koowaad, ma loo adeegsan karaa tarmintii koowaad? Aragti ahaan waxa ay ila tahay in aaney aheyn laba erey oo is qaadan kara, ama isku dhigma. Waase weydiin u furan akhristaha?
Dhanka dambe ee jeldiga, waxa ku qoran qoraha erey laga yidhi buuggiisa oo dad waayeel ahi ka yidhaahdeen, isla jeerkaasi waxa ku sawiran boggaasi sawirka qoraha. Waxa aan is weydiiyey waxa isla doontey ii dhehda buugga iyo sawirka qoraha?Waa aragti aan aqoon ku dhisneyn. Laba mid uun bey tahay in la yeelo, in qoraha sooyaalkiisa halkan la galiyo si sawirkuna u galo, iyo in sawirka laga daayo oo ii dhehdu gasho halkan.
Buugyarahani haba yaraatee malaha xuquuqda lahaansha ee buugaagta la raaciyo, afka qalaadna lagu yidhaahdo “Copyright”. In buugga laga waayo lahaanshiyahiisa cidda leh, sannadka uu soo baxay, cidda daabacdey, iyo meesha lagu daabaceyba waxa ay tahay arrin buugga meel ka dhac ku ah, oo aan mudneyn. Qoraha buugganina inuu sidaa yeelaa waa aqoonyaraan weyn. Isla jeerkaasi buuggu malaha summadda“International Standar Book Number” ee loo soo gaabiyo “ISBN”. Inuu buuggu sumad laawe ahaadaa waxay iyana marag ma doon u tahay waayo-aragnimo la’aantii qoraha een soo xusay. Sida aanu qoruhu ka warqabin, sumaddaasi wax badan bay xambaarsan tahay. Tusaale ahaan waxay muujisaa cidda daabacday, dalka buugga lagu daabacay, afka uu buuggu ku qoran yahay. Isku soo wada xooriyoo, buuggan shirkad ama shaqsi daabacdeyna hadalkeedaba daa!
Docda kale buugga magaciisa iyo “Footnote-ka” la raaciyey is malaha. Tusaale ahaan buugga waxa la yidhaahdaa “Masraxa Cadaabta”, halka uu ka dhigey qoraal hoosaadka socda ee buugga “Masrixii Cadaabta”. Waad garan kartaa halka cilladdu ka jirto naxwe ahaan ama higgaad ahaan ba. Waa hal-xidhaale qoraha buugga hor yaal, oo aanu furdaamin Karin. Talada aan halkan ka geysanayaa waxa ay tahay in qoraanimada ay ka horreyso ardeynimada qallinku. Taasi oo aan filaayo inuu ka soo dul boodey qoraha buuggani.Waxa kale oo ii caddaatay inuu qoruhu magaca buugga ka soo ergistay maanso ka mid ah maansooyinkii (AHUN) Maxamed Xaashi Dhamac ‘Gaarriye’ oo la yidha ‘Kaba Caseeye’ tuduc ku jirey oo u dhigma magac buugga. Meelna kuma arkin uu qoraha buuggu ku xusaayo sida buugga magaciisu u baxay, halka uu ka keeney, iyo sida aanu u xusin in ay ku jirtey maansadaasiba.
Sida uu qabo qoraaga Saddam Xuseen Carab (2013), mar haddii sheeko faneeddu ku salaysantahay male-awaal, uu curiyaha sheekadu ka unkayo maskaxdiisa, waa in ay jiraan hab loo dhiso iyo waddooyin qofka u sahlaya. Wax wal oo la dhisayaa rukunno uu ku taaganyahay oo ma-huraan u ah buu lee yahay. Sheeko faneedduna sidoo kale dhidibbo lama huraan u ah dhismeheeda ayey leedahay, kuwaas oo aynu ku soo koobi karno: Jile, Goob, Dhibaato, Dhacdo iyo duluc. Haddii aan si fudud u sii yidhaahdana waa in sheekada laga helo arrimo door ah oo aynu ka xusi karno;Yagleelid, Sugidda jilayaasha, Hab dhaca sheekada, Tebiyaha sheekada,Xurgufta, Figta xiisaha sheekada, Mawduuca, iyo Xulashada ereyada iyo qaab qoraalka. Inuu qoruhu qaabkaa raacay oo ay sheekooyinkiisu aragtiyahaasi ku salaysan yihiin iyo in kale akhristaha ayaan u dhaafay.
Tusaale ahaan Sheekada “Nabsi iyo Nabar Jacayl”, haddii aad akhrido waxa aad ku dawakheysaa iney sheeko tahay, iney maqaal tahay, iyo iney wax kale tahay. Sheekadan qoruhu waxa uu isku marginayaa isticmaalka qofka koowaad ee jilaha ah, iyo jile kal-kaalayaasha sheekada oo aanad kala garaneynin cidda hadleysaa cidda ay tahay. Dhammaan sheekooyinka buugga ku qoran, marka laga tago halka sheeko ee qoraha buuggani aanu laheyn, waxa ay yihiin kuwa fawdo ah oo aan madax iyo mijo kala laheyn dhinaca adeegsiga “qofka koowaad, qofka labaad, qofka saddexaad ee sheekada”. Tusaale ahaan afarta sheeko ee buuggan ku duugani waxa ay isku marginayaan arrintaasi oo si laxaad leh ugu baahsan buugga. Intii aan akhrinaayey waxa aan aad ugu dawakhey jilaha hadlaya, cidda uu yahay. Bogag badan ayaan ku arkey ereyada;aniga, igu, aan yeelay, aan sameeyey, aan falay, ay igu dhacdey……..iqb.
Qoraha buuggani hore iyo dambeysaba innalama uu wadaagin in sheekooyinkani yihiin khayaal uu maskaxdiisa ka curiyey iyo iney yihiin dhacdooyin dhab ah oo isaga ku dhacey. Midkey doontaba ha ahaatee, waxa hubanti ah in ay gef weyn ku tahay xeerarka ay ku dhisan tahay sheeko faneeddu in afkaarta qoraha sheekada oo mutaxan si badheedh ah loogu dhex arko. Taasi oo sheekadii ka dhigeysa ama u rogeys maqaal dhacdo laga qoray.Maxaa magaca qoraha meeshan keeney? Inuu buuggan qorey yuu u sheegayaa? Sheekadu wakhtiga ay dhacdey iyo buuggani aminta uu soo baxay maxaa iska galay? Ma sheekaa, ma ………….?
Halka kuwa ay ahayd inuu labanlaabanaaanu labanlaabin sida; “waxa yaalay. Fadhino, dheeman, dhexdeena, dhinaceena, todoba,”. Ceebta ugu weyn ee buuga dhex yuuruurtaa waa halkan oo isku ceyn iyo beyd go’day. Halkani waa meesha uu buuggu ka dhutinaayo ee laga dheehan karo waayo-aragnimada hooseysa marka aad aragto weedhahaasi sida qaabka daran ee uu u adeegsadey qoruhu, weedhahaasi oo micnihii dhabta ahaa ka tagey markii higgaad ahaan ay jabeen. Intani maaha oo keli ah inta ku jirta buugga ee higgaad ahaan khaldan, ee waa tusaale uun, bogag badan oo buugga ah waxa dhex ceegaaga gefefkaasi.
Ceebta kale ee iyaduna buugga fadeexadda weyn ku noqotey ayaa ah in weedho badan oo naxwe, af ahaan iyo dhisme ahaanba jaban ay buugga ka buuxaan bog kasta, taasi oo igu keentey in aan fahmi waayey bogag badan oo buugga ka mid ah. Weedhahaasi markii hore waxa aan u qaatey in cillad farsamo oo xagga qoraalka Koombiyuutarkaah ay tahay, hayeeshee, waxa aan arkey iney meelo badan soo noqnoqonayaan. Taasi ayaa igu dhallisey inaan weydiimo door ah maanka iska warsado. Tusaale ahaan bal u fiirso akhriste, oo ila dhugo inta aan ka soo qaadey buugga oo ah sida ay ugu qoran yihiin ee ay u jajaban yihiin dhammaantood.
-Ayaan waxa ay dareentey xanuun markii ay usbuucgurigii jiiftayna way ka fursan wayday in ay dakhtar ka tagayo
“……….Waxaa loo soo kicitimay dhinacaa iyo Internet ka oo ku yaallay meel u dhow guriga Samiira ay gasho. Habeenkaa interner-ku aad buu u buuxey”.
Halkan markaan maraayey waxa aan fahmi waayey waxa uu u jeedey qoraha buuggu. Waxase aan gadaal ka fahmey inuu u jeedo meherrad laga isticmaalo adeegga internet-ka. Maxaa is fahan waaga halkan keeney? Kow waxa keeney in ereyga “internet” sida uu u qoran yahay labada meelood ay aad u kala duwan yihiin, iyo laba in Internet-ku aanu aheyn goob ee uu yahay magacguud. Waxa qumaneyd in magaca meherrad internet-ka ah uu odhan lahaa, si loo fahmo si sahlan.
Previous: Jabuuti Oo 3 Sarkaal Ku Wayday Shil Diyaaradeed Maanta
Next: Budhcad Gaadhi Qaali Ah Xadday Iyaga Oo Dameero Adeegsanaya